“ဘယ် ဘက်မှာ နေမလဲ” | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Poetry » “ဘယ် ဘက်မှာ နေမလဲ”	23
Posted by ကိုပေါက်(မန္တလေး) on May 12, 2015 in Poetry | 23 comments
ခင်ဇော် says: အမေ့ ဘက်ပဲ နေမယ်
အောင် မိုးသူ says: တစ်ခုတည်းသော မျှော်လင့်ချက်…. တစ်ယောက်တည်းသောသူဘက်မှာနေမှာပေါ့။
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: စိတ်ကူးနဲ့လက်တွေ့တစ်ထပ်ထဲ ကျရင်တော့အကောင်းဆုံးပေါ့
Mr. MarGa says: မှန်​တဲ့ဘက်​မှာ ​နေမယ်​ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1377
၀င့်ပြုံးမြင့် says: .အမေနိုင်လို့ တိုင်းပြည် သွေးချောင်းစီးသွားမယ်ဆိုရင်တောင် ကျမ မဲတစ်ပြား အမေ့အတွက်။
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: ဖဲစကားနဲ့ပြောရ ရင် အမြင်နဲ့တင် သာနေတာအမှန်ပါဘဲ
မှောက်ထားတဲ့ ဖဲ က သာ မဖောက်ပါစေနဲ့ဆုတောင်းနေရတယ်
ကိုယ်နိုင်စေချင်တဲ့သူက ၀င်မပြိုင်မှာဘဲ စိုးရိမ်နေပါတယ်။
အရီး လေး says: ဘယ်​သူ​တွေ ဘယ်​​လောက်​ပုတ်​ခတ်​ ပါ​စေ
မယိုင်​မလဲ စိတ်​ဓာတ်​ခိုင်​မာတဲ့ ပြတ်​သားရဲရင့်တဲ့
တစ်​ဦးတည်း​သော ထူးချွန်​သူ အမျိုးသမီး ကို
အားမ​ပေးရင်​ ဘယ်​ဖြစ်​မတုန်း​​ .
Mike says: .အမှန်တရားဘက်ကိုလူတွေသိနေပါပြီလေ..ဒါပေမဲ့ကိုယ်ပေါက်ပြောတဲ့ “မှောက်ထားတဲ့ ဖဲ ”
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: တော်ကြာ ဟိုက show ခေါ်လိုက်ရင် ကိုယ့် လူက မလိုက်မှာလဲ စိုးနေရတယ်
မဟာရာဇာ အံစာတုံး says: ဒါပေါ့ဗျာ ..
ခပ်ရဲရဲ ဆုံးဖြတ်ဖို့ လိုတာပေါ့ …
aye.kk says: ညာနေတာတွေကို
Alinsett @ Maung Thura says: ညာဘက်မှာနေမယ်…
ဘုရားသိကြားမလို့… အမေ… သန်မာတဲ့ ညာဘက်မှာ ရှိနေပေးပါ…
အမေ… ဘယ်သန် /ဘယ်ဘက် မရောက်သွားပါစေနဲ့..
kai says: political spectrum အရဆို.. ဒေါ်စုက.. ဂန္ဒီကြီးလမ်းစဉ်နီးသမို့.. ဘယ်ဖက်မှာရှိသဗျ…။
အခု.. ယူအက်စ်က.အိုဘားမားလည်း.. ဘယ်ဖက်ခြမ်း..။ လစ်ဘရယ်သမားတွေကို.. ဘယ်ခြမ်းထားလေ့ရှိတယ်..။
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: စဉ်းစားဘို့မလိုာဘူးကွယ်​
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: ကိုယ်နေချင်တဲ့ ဘက်က လူ ပါမလာမှာကိုတော့ စိုးရိမ်မိပါတယ်။
ခင်ခ says: ဟိုးတုန်းက ဖေကြီဘက်
ပြီးတော့ ဖေကြီးလိုလို မေကြီးလိုလို
uncle gyi says: ဘက်ကရွေးစရာမလို
Ma Ma says: ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်က ၂မျိုးဖြစ်နေတယ်။
Virtual world နဲ့ Real life ပေ့ါ။
Virtual world က လူတွေကတော့ မေကြီးလို့ တစ်သံတည်း ထွက်ကြတာများတယ်။
Real life က လူတွေကတော့ မိန်းမဖျက်ရင် ပြည်ပျက်မယ်လို့ တဘောင်ရှိတယ်လို့ ပြောတဲ့သူကပြော၊ ဘယ်သူ့ထည့်ရမှန်းမသိတဲ့သူက မသိ၊ အလုပ်ရှုပ်တယ် သွားမထည့်ဘူးဆိုသူကဆို။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 9265
ဦးကြောင်ကြီး says: ကိုပေါက် ချို သောက် လျှိုချောက် ညိုမျောက်
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: မျောက်ညို ခေါက်တို
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: မမ ရေ လူတွေစဉ်းစားရခက်အောင်
padonmar says: ဘယ်တုံးကမှ ဘက်မပြောင်းခဲ့ပါဘူး။
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: မမာရေ